ब्रह्माण्डमा ताराको संख्या कति छ ? - Birgunj Sanjalब्रह्माण्डमा ताराको संख्या कति छ ? - Birgunj Sanjalब्रह्माण्डमा ताराको संख्या कति छ ? - Birgunj Sanjal
१२ चैत्र २०७७, बिहीबार ०४:१५
वीरगन्ज ।हामी रातमा आकाशमा धेरै तारा देख्छौँ, हाम्रो मनमा सधैँ एउटा जिज्ञासा उठिरहन्छ । त्यो हो, आखिर ब्रह्माण्डमा कति तारा होलान् त ?